Ukuhwebelana kokuqukethwe kwenkampani enkampanini yanamuhla yokuhlinzekwa kwemidiya: i-explainer | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Ukudilizwa kokuqukethwe » Ukuhwebelana kokuqukethwe kwenkampani enkampanini yesimanje yokuhlinzekwa kwemidiya: ochazayo
Isikhulu Esiphethe Isu, Signiant
Embonini yanamuhla yezindaba, ukuhambisa inani elikhulu lokuqukethwe ngokushesha nangokuvikelekile phakathi kozakwethu kubaluleke kakhulu. Ukushintshana kokuqukethwe okuzenzakalelayo, okuphakathi kwenkampani, phakathi kwezinkampani zabo bonke osayizi namajografi, kubaluleke kakhulu ekukhiqizeni futhi ikakhulu ekusabalalisweni kwamafilimu ashukumisayo futhi ahlukahlukene, imibukiso yethelevishini, imidlalo yevidiyo, izimpahla ze-OTT / VOD, nezinto ezihambisana nakho futhi imethadatha ezindaweni eziningi kuketanga lokuhlinzeka futhi inqwaba yamapulatifomu.
Iqiniso eliyisisekelo namuhla ukuthi ayikho inhlangano eyisiqhingi. Amaligi ezemidlalo asebenza nabasakazi nabanamalayisense amalungelo abezindaba emhlabeni jikelele; ama-studio asabalalisa okuqukethwe kuma-cinema, eziteshini ze-TV nakuma-cable opharetha, amapulatifomu e-VOD, namapulatifomu e-OTT; ibutho labathuthukisi begeyimu nabahloli emhlabeni wonke basebenza ndawonye ukukhiqiza okwenziwayo kokudlala kwe-blockbuster. Lokhu akunakwenzeka ngaphandle kokushintshana kokuqukethwe okuqinile nokuvikelekile okungasebenza ngaphakathi naphakathi kwezinkampani.
Ukuhambisa nokufinyelela okuqukethwe phakathi kwamaqembu ngaphakathi kwenhlangano kungaba yinselele kukodwa. Ukukwazi ukwenza kanjalo ezinhlanganweni ezahlukahlukene kukhulisa ubunzima. Njengoba kunikezwe isimo semboni ku-2020, ukusebenza kwezinkampani okujwayelekile kuyinto evamile futhi izinkampani kudingeka zikwazi ukushintshanisa okuqukethwe ngokukhulu ukushesha nangokungenamthungo - lokho kufanele.
Ukuhwebelana kokuqukethwe kwenkampani: ukusebenzisana komhlaba wonke, okuqukethwe kwasendaweni
Amabhizinisi e-M & E ayazi ukuthi kunezidingo ezikhulayo nabashayeli bamabhizinisi abadinga ukubambisana ukuqinisekisa ukwenziwa nokusatshalaliswa kokuqukethwe kwabo. Isidingo esikhuphukile sokuqukethwe okwenziwe endaweni okwenziwe kuzinkundla ezahlukene ezahlukahlukene sikhombisa ukuthi kunesidingo sobudlelwano obuxhumekile kunkampani enkulu yokuphakela eyinkimbinkimbi. Noma ngabe kunesidingo sokukhiqiza okuqukethwe okusatshalaliswa emhlabeni wonke noma iligi yezemidlalo eletha amaphuzu avelele kunethiwekhi yabalingani abasakazwayo, amabhizinisi emidiya ngokwemvelo azithola exhumene ngokwengeziwe, uhlelo lwawo lwezinto eziphilayo luyanda kakhulu, kanye nesidingo sokuhambisa okuqukethwe okuningi futhi kubaluleke kakhulu. Ukuthi le webhu eboshiwe kakade manje ifaka ukuqhuma kwamafomethi namapulatifomu ahlukile (amatiyetha, amasayithi okusakaza, izinhlelo zokusebenza zemidiya ephathekayo) kubeka ingcindezi enkulu ezinhlanganweni ukuthi zenze ukushintshana kokuqukethwe okuhambisana nezimo futhi kuvikeleke phakathi kwezinkampani.
Namuhla amabhizinisi e-M & E ayakwazi ukusabalalisa okuqukethwe kwawo emhlabeni jikelele kuzingxenyekazi eziningi ezahlukahlukene nabahlinzeki okwenza ukudluliswa kwezinkampani kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili. Noma ngabe kuyipulatifomu ye-VOD eletha okuqukethwe kuma-cable opharetha, izindlu zokusabalalisa amafilimu ezithumela ama-DCP kuma-cinema, noma amanethiwekhi wethelevishini ahambisa okuqukethwe ku-playout, ukusatshalaliswa kwesimanje kudinga uchungechunge lokunikezela oluxhunywe kakhulu olusekelwa ukudluliswa okuzenzakalelayo, okuphakathi kwenkampani.
Ukulandela umdlalo welanga-ukuthuthukiswa
Noma, cabanga ngonjiniyela wegeyimu osebenza ngesitudiyo esihlukile kusihloko sabo sakamuva se-blockbuster. Njengoba amaqembu enhlanganweni eyodwa enza izinguquko ekwakhiweni agxile kukho, abalingani babo kumele bakwazi ukwethemba ukuthi bazothola njalo uhlobo olusha lomdlalo, ukuze bangazitholi ngokungazelelwe amahora omsebenzi abasanda kuwathola put in bekunguqulo ephelelwe yisikhathi. Lokhu kuyadingeka ikakhulukazi ngokuhamba kwelanga okusebenza okuthembela kumaqembu ezindaweni eziningi zesikhathi. Ukuqinisekisa ukuthi inguqulo efanelekile yokwakhiwa komdlalo kulapho kufanele ibe khona lapho abantu abalandelayo behlala phansi ukwenza imisebenzi yabo kubalulekile ekunciphiseni amaketanga okuhlinzekwa okunzima, ukuhlangabezana nezinsuku zokugcina (ikakhulukazi embonini eyaziwa kahle kakhulu ngomzuzu wokugcina) , kanye nokugcina, okungabukeka kungenye indlela njengeziphithiphithi, uku-oda nokusebenza.
Amasethi wedatha eyinkimbinkimbi njengamafomethi wozimele-ngohlaka
Ngenkathi i-automated, exchange inter-company yenzeka kaningi ngesikhathi sokuhlanganiswa nokusatshalaliswa, futhi kungaba yinselele ngesikhathi senqubo yokudala okuqukethwe. Lapho ama-studio akhiqiza ngemuva nezindlu ze-VFX zisebenza ku-blockbuster enkulu, zizohlala zisebenza ngamafomethi wozimele-ngohlaka afana ne-DPX noma i-EXR. Kulezi zimo, amafolda anezigidi zamafayela adinga ukubuyiselwa emuva estudiyo noma aye kwenye indlu ngemuva kokukhiqizwa, futhi ngendlela yokulandela ilanga. Amathuluzi ajwayelekile alwa nalawa masethi wedatha ayinkimbinkimbi ngakho-ke isoftware efanelekile yokwenza ukuhamba kwalokhu kusebenza ibaluleke.
Ukuxhuma amabhizinisi amakhulu emidiya nabalingani bawo be-SMB
Inselelo eyodwa ehlupha imboni ukuthi ubuchwepheshe obuthuthukisiwe obusetshenziswa izinkampani ezinkulu abutholakali ngaso sonke isikhathi kunethiwekhi yabahlinzeki abancane ababalulekile embonini. Intuthuko kwezobuchwepheshe bamafu, ikakhulukazi izixazululo ze-SaaS, zisiza ukudiliza lezo zithiyo, zinikeze amabhizinisi amancane amathuluzi anamandla okubamba iqhaza kalula kunketho lokuphakelwa komhlaba. Izinselelo zokuphepha ziyakhuliswa lapho kusebenza nezinkampani eziningi, eziningi zazo ezincane. Ukuba nesethi efanayo yamathuluzi wokuhlangabezana nezindinganiso eziphakeme zokuphepha ezidingeka embonini yanamuhla akuyona into yokunethezeka, kodwa iyimfuneko. Akufanele nje kuphela ukuthi amathuluzi avikele okuqukethwe abakushintshayo, kufanele kube lula ukukusebenzisa, ukuphatha, futhi abe nosayizi ofanele futhi abe nentengo yokwamukelwa yinoma yiliphi ibhizinisi losayizi.
I-Signiant ikusiza kanjani ukushintshisana kokuqukethwe kwenkampani
I-Signiant sekuyisikhathi eside ingumthengisi othenjiwe wokushintshana kokuqukethwe kwenkampani ezinkampanini. Umkhiqizo wethu we-Manager + Agents usetshenziswa izinkampani zemidiya eziphambili emhlabeni jikelele ngokushintshana kokuqukethwe okuzenzakalelayo ngaphakathi naphakathi kwezinkampani. Umkhiqizo wethu weMedia Shuttle uvumela abantu ukuthi bafinyelele futhi babelane ngokuqukethwe emhlabeni jikelele futhi manje uxhuma amabhizinisi angaphezu kwama-25,000 wabo bonke osayizi.
Lapho sethula iSigniant Jet ™ ngonyaka odlule, sahlanganisa ubuchwepheshe bethu ekuhambeni kwamafayela ohlelo okuzenzakalelayo nobuholi bethu kwi-SaaS edabuka emafini. Lokho kwenza ubuchwepheshe obuthuthukisayo be-Signiant nobuchwepheshe bokusheshisa bufinyeleleke ezinkampanini zabo bonke osayizi futhi kwehlise kakhulu ukungqubuzana kwezinkampani ezinkulu zemithombo yezindaba emhlabeni ukusetha ukushintshana kokuqukethwe okuzenzakalelayo nabalingani babo abancane.
Ngasekuqaleni konyaka, uSigniant wandise amakhono enkampani, wengeza indlela engasindi kepha evikelekile kuJet yokushintshana kokuqukethwe okuzenzakalelayo phakathi kwezinkampani. Ngalokhu, izinkampani ezimbili ezinayo i-Jet zingasetha kalula nangokuvikelekile isiphambano trust, ephethwe ngokuphelele kusuka efwini. Ngaphezu kwalokho, ngamabhizinisi amaningi andayo asebenzisa iJet, izinkampani zingenza amaphuzu abo okugcina atholakale epulatifomu lethu lamafu ngokuqhubeka nokwenza lula lokhu kushintshana phakathi kwezinkampani.
Lapho ukwethenjwa sekukhona phakathi kwezinkampani ezimbili, bangakwazi ukusungula imisebenzi okuvunyelwene ngayo lapho uhlangothi ngalunye lukwazi ukugcina ukulawulwa okuphelele kwesitoreji sabo kanye namanethiwekhi abo. Akukho ukwabiwa kwamaphasiwedi noma olunye ulwazi olubucayi oludingekayo njengoba ukuxhawulana konke kuphathwa ngokuphepha efwini. Lokhu kuyinzuzo enkulu futhi ehlukanisa ipulatifomu ye-SaaS enelungelo lobunikazi eSigniant lapho indiza yokulawula ifu inikezela ukuhlelwa, ukubonakala nokulawulwa kokufinyelela kepha okuqukethwe kuhamba ngqo kusuka kusitoreji senkampani eyodwa kuye kwesinye.
Ukuhwebelana kokuqukethwe kwenkampani phakathi nenkathi yesimanje
Imboni yezindaba nezokuzijabulisa ayikaze yehluke kakhulu, ibe yimbulunga yonke, noma ibe namandla kakhulu kunanamuhla, futhi lo mkhuba uzoshesha kuphela. Ubhadane nomthelela walo embonini kukhombisa isidingo sokuguquguquka, ukuqina, futhi sikwazi ukuxhuma kumaketanga amakhulu wokuhlinzeka. Ngakho-ke yini okudingeka uyicabangele ukukulungiselela umcimbi olandelayo ozothinta umkhakha?
Ukuhambisa amasethi wedatha abucayi kakhulu, amakhulu, anzima phakathi kwezinkampani esikhathini samanje kudinga indlela entsha. Kudinga isoftware engasebenzela ibhizinisi elilinganiselwe, elingasebenzisa noma yikuphi umkhawulokudonsa otholakalayo, futhi elingasebenza nganoma yiluphi uhlobo lwesitoreji. Kumele inikeze ukuphepha kanye nokubonakala kwebhizinisi; Isixazululo esinikeza ukwethembeka lapho izikhathi ezinzima zibucayi nezimo zicindezela. Kumele kube lula ukuphaka futhi kusebenze futhi kuvumele izinkampani ukuthi zisheshe futhi ziphendule esimweni esinamandla somkhakha. I-Signiant Jet enekhono layo phakathi kwezinkampani yakhelwe ngqo ukuhlangabezana nalezo zidingo.
Unentshisekelo yokufunda kabanzi ngeJet nokuyibona isebenza?
Ngaphambilini: Umenzi Wokusakaza
Olandelayo: Ama-GB LABS akhombisa izixazululo zokulondolozwa kwanamuhla e-VIRTUAL BROADCASTASIA